ပန်ဒိုရာ: နေရောင်အောက်မှာ လင်းလက်နေတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ
ရတဲ့အခွင့်အရေးကို မလွတ်အောင် ဆုပ်နိုင်ဘို့လည်းလိုသေးတယ။် တစ်ခါတလေ တစ်သက်မှာ တစ်ခါဘဲရတတ်တယ်လေ။
ရုပ်ရှင်လေးက ကောင်းလိုက်တာ။ ဖြစ်တတ်တဲ့ လူ့သဘော သဘာဝလေးတွေကို ခပ်ပါးပါးလေး ပြသွားတာနော်။
လူတိုင်းရဲ့ဘ၀မှာ အနိမ့်အမြင့်တွေ ရှိကြတယ်။ နိမ့်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က လိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနှိမ့်လိုက်ဖို့ လိုတယ် ထင်မိတယ်။ နို့မို့ဆို ကိုယ့်တံခါးကို လာခေါက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို သတိမပြုမိဘဲ လွတ်သွားမှာ..။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖို့အခွင့်အရေး ဖန်တီိး လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
Diane Lane ကို သဘောကျတယ် ကျေးဇူးပါ ဒေါ်ပန်
Good point. One needs not be the victim of 'learned helplessness' to be able to grabachance or chances.
Yeah! The Opportunity and Chance are not the same...There will be so many
Opportunities which we don't want to hold anything but some few chances we want to try..that's the life !!
ပထမနှစ်တုံးက ကျက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာစာ စကားပုံလေးကို သတိရသွားမိတယ်
"အခွင့်အရေးဆိုတာ တံခါးကို ခေါက်ရုံသာခေါက်တတ်သည် တွန်းဖွင့်၍ ၀င်မလာတတ်တဲ့။" အခွင့်အရေးဆိုတာကို သိနေဖို့လိုသေးတာကိုး။ ပေးတုန်းက မယူ ဝေးသွားမှတမ်းတနေလို့ကတော့ အပိုတွေပါပဲလေ...
ဝေမျှတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ...။
ကြည့်ဖူးတဲ့ ကြိုက်ဖူးတဲ့ ကားလေးပေါ့ကွယ်-
တို့ကတော့..အဲဒီ ကားထဲမှာ ဘာကို သွားခံစားရသလဲ ဆိုတော့..လွတ်လပ်ခြင်း.. တပြိုင်တည်းပဲ တွဲပါနေတတ်တဲ့..မေတ္တာ ငတ်မွတ်ခြင်း။
အိမ်အိုကြီးကို သူ မြင်မြင်ချင်း ချစ်သွားတာ .. ရုပ်တန်ဖိုးတဲ့ ပိုတဲ့ အိမ်ကြီးရဲ့ စွဲဆောင်မူ..
မိန်းမ အဖော်ခြင်း ကြားက..ခင်မင် သံယောဇဉ်
( သူ့သူငယ်ချင်း.. grey' anatomy ထဲက..တရုတ်မင်းသမီး ကိုလည်း သဘောကျတယ်..သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့)
လူ့ဘ၀ တွေရဲ့..လူဆန်မူတွေ..မေတ္တာတွေ.. ရုန်းမထွက်နိုင်ခြင်းတွေ..ရုန်းထွက်ပြေးခြင်းတွေ.. မျှော်လင့်ချက်တွေ..
အဖြေမပါတဲ့... လူ့ဘ၀ ဇတ်လမ်းကောင်းလေး တခုပါ။
( အကြိုက်တူ)း)
ဒေါ်လေးရေ့ ...ဒီပို့စ်လေးတွက် ကျေးဇူး စာကြွင်းတွေကတော်တော် ကောင်းတယ် ။
Katherine: ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးပြောတဲ့ စကားလေး သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတာပဲ ကူးသွားပြီဗျာ..။
Opportunity ဆိုတာကို ပေးလာလို့ ရတဲ့အခွင့်အရေးလိုထင်တယ်... တစ်ခါလုပ်ပြီးရင်ပြီးသွားမယ်.။ Chance ကိုတော့ ကိုယ်ဘာသာရွေးခွင့် ရှိတဲ့အခွင့်အလမ်း.. အမြဲဆက်လျှောက်နေရမယ်လို့ထင်တယ်..။
ဒီပို့စ်လေး ရေးပေးတဲ့ မပန် ကို ကျေးဇူးတင်တယ်
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအျမိုးသမီးရဲ့ ဘ၀ ကို ကိုယ်ချင်းစာ နိုင်ပါရဲ့
opportunities နဲ့ chance နဲ့ မတူဘူးဆိုတာလဲ သေချာတာပေါ့
'opportunity' means "favorable; good forapurpose"
'chance' means luck; happening without known cause or planning
Today Cathy said...
Thanksalot...! Then it is true that the meaning of "Opportunity" and "Chance" looks like same but not.
I absolutely agree that it is not easy to grab the chance that's why all the people can not success in their life.
ဆုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးက တစ်လွဲကြီးဖြစ်နေရင်တော့ ဂွပဲ။ လူအများနဲ့ အစုအဖွဲ့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ရော ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်နိုင်မလဲ ဆိုတာကတော့ အတော်လေး ဟုတ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အမြင်မှားသွားတာနဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာ နှစ်ပေါင်းဆယ်စုချီပြီး ... ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးခဲ့ရပါပေါ့။
ဇာတ်ကားကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်တောင် အဲဒီလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ခံစားသိနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
ကြည့်ချင်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်လေး အခုထက်ထိ ကြည့်ဖို့အချိန်မရသေးဘူး.. ကျေးဇူးပါ မမပန်